महिनावारी ढिलो वा चाँडो किन हुन्छ ? महिला दिदी बहिनिहरुले जान्नै पर्ने प्रमुख कुरा - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
महिनावारी ढिलो वा चाँडो किन हुन्छ ? महिला दिदी बहिनिहरुले जान्नै पर्ने प्रमुख कुरा
महिनावारी गडबड हुनुको मुख्य कारण खानपानशैली भएको एक अध्ययनले देखाएको छ। ब्रिटेनको युनिभर्सिटी अफ लीड्सले गरेको एक अध्ययन अनुसार सो तथ्य सार्वजनिक गरेकाे हाे ।
प्रशस्त मात्रामा कार्बोहाइड्रेटयुक्त खाना खाने महिलाको महिनावारी छिटो हुने गरेको सो अध्ययनले देखाएको हो। बढी पास्ता वा भात खाने महिलाको पहिलो पटकको महिनावारी अरु महिलाको तुलामा एक डेढ वर्ष अगाडी नै हुने गरेको पाइएको छ । ब्रिटेनको युनिभर्सिटी अफ लीड्सले ९१४ महिलामाथि महिनावारीसम्बन्धी अध्ययन गरेको थियो।
अध्ययन अनुसार माछा र खसीको मासु बढी खाने महिलामा महिनावारी ढिलो हुने गरेको पाइएको छ। त्यस्तै, सागसब्जी बढी खाने महिलामा पनि महिनावारी ढिलो हुने गरेको पाइएको छ।
महिनावारी गडबड हुनुको अर्को कारण व्यक्तिको तौल, प्रजनन् क्षमता र हर्मोन पनि हो। माछामा पाइने ओमेगा- ३ फ्याट एसिडले शरीरमा एन्टिअक्सिडेन्टको मात्रा बढाउँछ। त्यस्तै कार्बोहाइड्रेटले इन्सुलिन प्रतिरोधको खतरा बढाउँछ। यी दुवैको महिनावारी गडबड गराउनुमा ठूलो भूमिका रहन्छ।
अध्यनअनुसार तरकारीमा भएको एन्टीअक्सिडेन्टले पनि महिनावारी गडबडीमा ठूलो सहयोग गर्छ। त्यस्तै हर्मोनमा गडबडी आएमा यौनशक्ति प्रभावित हुन्छ। एस्ट्रोजन पनि बढाउँछ। यस्तो अवस्थाका महिलाको महिनावारीको चक्र प्रभावित हुनेगर्छ।
महिनावारी चाँडो हुने महिलामा मुटु र हड्डीसम्बन्धी समस्या र ढिलो महिनावारी हुने महिलामा स्तन वा गर्भाशयसम्बन्धी रोग लाग्न सक्ने संभावना बढी हुने अध्ययनले देखाएको छ। बीबीसी